डडेलधुरा बस दुर्घटनामा बाँचेका बालकले जब रूदै आमा खोजे… « Khasokhas Follow @khasokhasmag
डडेलधुरा बस दुर्घटनामा बाँचेका बालकले जब रूदै आमा खोजे…
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको बेड नम्बर ५१८ । दिपालय सिलगडी नगरपालिका–४ डोटीका १० वर्षीय घाइते बालक नवीन विक आमा, आमा…. भन्दै रोइरहेका छन् । गत बिहीबार डडेलधुरामा भएको बस दुर्घटनामा परेर उनकी आमा सरस्वती विकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । संयोगले उनका छोरा नवीन बाच्न सफल भए ।
चिकित्सकले नवीनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनको हात भाँचिएको छ भने टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । तर उनीसँग न त उपचारमा साथ दिने परिवार छ न सम्पत्ति नै । आमाको दुर्घटनामा परी मृत्यु भयो । दिदी दिपा विक घाइते अवस्थामा छिन् । उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बुबा नौ वर्षअघिदेखि नै घरपरिवारको सम्पर्कमा छैनन् । १४ वर्षीय दाइ मुकेश विक बालमजदुर हुन्।
नवीनलाई हेरविचार गर्ने कोही नभएर हजुरआमा हिरा विकले रेखदेख गर्छिन् । तर, उनी आफूसँग पनि पैसा नभएको दुखेको पोख्छिन् । उपचार कसरी गराउने समस्या भएको बताउँदै उनले सहयोग जुटाइदिन आग्रह गरिन् ।
‘उसको घरमा रेखदेख गरिदिने कोही छैन, आर्थिक अवस्था पनि ठीक छैन, मेरो नजिकको नातेदार पर्ने भएकाले मैले हेरिरहेको छु,’ हिराले भनिन्, ‘ऊ होसमा आउँदा जहिले आमा, आमा…. भन्दै खोज्छ ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले महादेवको पनि उपचारमा समस्या छ । उनको कुरुवा बसिदिने कोही छैनन् । डोटी घर भई काठमाडौंमा बस्दै आएका डडेलधुराकै हेमराज भट्टले घाइतेको उपचार र हेरचाह गरिरहेका छन् ।
नवीन, महादेवजस्तै ट्रमा सेन्टरमा गन्यापधुरा गाउँपालिका–३, डडेलधुराका २२ वर्षीया मिना भुल, शिखर नगरपालिका–११, डोटीका ३० वर्षीय भक्तबहादुर बलायर र शिखर नगरपालिका–१० का बस सहचालक लोकबहादुर महराको उपचार ट्रमा सेन्टरमा भइरहेको छ । तर, आर्थिक अभावमा उपचारमा समस्या छ।
विभिन्न दलका नेताले उनीहरुलाई भेटिरहेका छन् । उपचारमा सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिइरहेका छन्। नेताका साथै जिल्लाका बुद्धिजीवीले रेखदेखमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
डडेलधुराको अमरगढीस्थित उग्रतारा मन्दिरमा लागेको मेला हेरेर फर्कने क्रममा बिहीबार साँझ डा. केआईसिंह राजमार्गअन्तर्गत अमरगढी नगरपालिका–११ रडुवाखोलामा से१क २९३ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको थियो।